Global Voices teny Malagasy » Maty novonoina ny mpamorona sady webmaster-n’ny mpanohitra ao amin’ny tranonkalam-baovao Ingush · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Janoary 2019 3:59 GMT 1	 · Mpanoratra Sami Ben Gharbia Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Rosia, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
Maty novonoina i Magomed Yevloyev, mpamorona sady webmaster-n’ ny tranonkalam-baovaon'ny Ingush mpanohitra, Ingushetiya.Ru , nandritra ny fihazonan'ny polisy azy. Nitatitra ny tranonkalany  fa voatifitra teo amin'ny lohany i Magomed rehefa avy nosamborin'ny manampahefana Ingush tamin'ny fahatongavany tao amin'ny seranam-piaramanidina Nazran (Magas). Nodimandry tany amin'ny hopitaly izy.
Mpanohitra malaza an'i Murat Zyazikov, filohan'i Ingushetiam, mpanohana an'i Kremlin, i Magomed. Araka ny voalazan'i Miami Herald , nahatezitra an'i Rosia tamin'ny fanakianana ny fitondran'ny polisy ny sivily ao amin'ny faritra i Yewloyev. “Nandidy azy hanakatona ny tranokalany ny fitsarana tamin'ny volana jona noho ny fampielezana fanambarana “mahery fihetsika” saingy nipoitra indray tamin'ny anarana hafa.“
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/09/133015/
 Nitatitra ny tranonkalany: http://ingushetiya.wordpress.com/2008/08/31/owner-of-site-ingushetiyaru-killed/